Himalaya Dainik » मन्त्रीले उल्टै सोधे : सक्कली अपराधी कहाँ छन् ? देखाइदिनुपर्‍यो !
मन्त्रीले उल्टै सोधे : सक्कली अपराधी कहाँ छन् ? देखाइदिनुपर्‍यो !
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा सदा झै यो पटकपनि पत्रकारमाथी खनिए।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्याराको खोजी प्रकरणमा प्रहरीले समातेका व्यक्तिलाई मिडियाले ‘नक्कली अपराधी समातियो’ भनेको बिषयमा गुनासो गर्दै मन्त्री बास्कोटाले आक्रोश पोखे । उनले निर्मला पन्तको नाम त लिएनन्, तर संकेतचाहिँ सोही प्रकरणतर्फ गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो ।
‘यहाँ त कस्तो अप्ठ्यारो भयो भने मान्छे समात्यो, यो पनि नक्कली हो भन्छन् । छानविनै गर्नै हुँदैन,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सक्कलीचाहिँ को हो त उसोभए ? देखाइदिनुपर्‍यो नि त थाहा हुनेले !’
नक्कली अपराधी समातेको भनेर लेख्नेले सक्कली अपराधी देखाइदिनुपर्ने उनी थप अाक्रोसित बने । उनले थपे – ‘त्यसोभए सक्कली अपराधी कहाँ छन् ? त्यो लेखिदिनुपर्‍यो नि । कि सक्कली को हो भनेर उसैलाई समाउन त मिलेन होला ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले काठमाडौंको गैरीधारामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले भने- ‘जब सरकारले छानविन गर्दैछ, अनुसन्धान गर्दैछ, पत्ता लगाउने संकल्प छ भने मान्छे समात्दा फेरि अर्को नक्कली समात्यो भन्छ । भन्दै अाक्रोश ब्यक्त गरे ।